Puntland oo dambiile u aqoonsatay dadka diidan lacagta Shillin Soomaaliga - Awdinle Online
Maamulka Gobolka Mudug ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa si kulul uga hadlay diidmada ay qaar kamid ah Ganacsatada & Bulshada Magaalada Gaalkacyo ay ka muujiyeen lacagta Shillinka Soomaaliga.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Puntland Cabdo ladiif Muuse Nuur San-yare ayaa sheegay qofkii diida isticmaala lacagta Shillinka Somaaliga ay u aqoon san doonaan inay tahay dambiile.
Waxaa uu sheegay in sababah keenay sicir bararka kajira Magaalada Gaalkacyo ay tahay, kaddib markii Ganacsatada ay didien isticmaalka lacagta Shillin Soomaaliga, waxaana Ganacsatada iyo sariflayaasha uu ugu baaqay inay socod siiyaan lacagta.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Puntland Cabdo ladiif Muuse Nuur San-yare waxaa uu sheegay in dhankooda ay fulin doonaan amarka ah isticmaalka lacagta Shillinka Soomaaliya dadkii diidana ay tallaabo ka qaadi doonaan.
24-kii saacadood ee la soo dhaafay ayaa waxaa siwyen Magaalada gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug looga dareemay sicir barar xoogan, kaddib markii badi Ganacsaatda ay diideen isticmaalka lacagta Shillin Soomaaliga.
Previous articleRW Rooble oo farrin adag u diray musharixiinta ku shirsan Muqdisho
Next articleQarax khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho